“Inaan Kooxdiisa Ka Tirsanahay Xitaa Ma Oga” – Pedro Porro Oo Guardiola Ku Dhaleeceeyay Arrin Qariib Ah – Garsoore Sports
“Inaan Kooxdiisa Ka…
“Inaan Kooxdiisa Ka Tirsanahay Xitaa Ma Oga” – Pedro Porro Oo Guardiola Ku Dhaleeceeyay Arrin Qariib Ah
Xiddiga kooxda Manchester City ee Pedro Porro ayaa sheegtay inuusan waligiis la hadlin Pep Guardiola, isagoo dhanka kale tibaaxay inuu qarka u saaran yahay inuu dhammeystiro heshiis rasmi ah oo uu ugu wareegayo kooxda Sporting CP.
City ayaa ku bixisay 11 milyan oo ginni oo ah si ay Porro u keento Etihad Stadium iyadoo kasoo iibisay kooxda Girona sannadka 2019, isla markiiba waxay amaah ugu dirtay Real Valladolid si uu u sii wato horumarkiisa.
21 jirkaan ayaa kusoo laabtay Manchester xagaagii la soo dhaafay kaddib markii uu daqiiqado caadi ah uu ku dhibtooday waqtigiisa Valladolid, iyadoo kooxda Sporting ay ku qaadatay heshiis amaah labo sano ah, waxaana kooxda reer Portugal ay haatan u muuqata inay si joogto ah u iibsaneyso daafacan middig.
Porro ayaa saxiixay qandaraas shan sano ah markii ugu horeysay ee uu yimaado City, laakiin weli ma arkin hal daqiiqo oo tartan rasmi ah oo uu u safto kooxda.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa sheegay inuusan wax xiriir ah la sameynin Guardiola intii uu ku jiray diiwaanka kooxda ka dhisan Manchester, waxaana uu xitaa soo jeediyay in tababaraha weli uusan ka warqabin joogitaankiisa
“Maya, waligey lama aanan hadlin Pep Guardiola. Uma maleynayo inuu xitaa ogyahay inay i shaqaaleeyeen (qosol),” Porro ayaa yiri intii lagu jiray wareysi uu siiyay daabacaadda Burtuqiiska ee ee A Bola.
“Laakiin waa inay ka warqabaan wixii aan qabanayay.”
Bandhigyadiisii Ugu Dambeeyay
Sporting ayaa dooneysa inay si joogto ah ulasoo saxiixato Porro kaddib markii ay u arkeen inuu door muhiim ah ka ciyaaray hanashadoodii horyaalka ee xilli ciyaareedkii hore.
Amaahda City ayaa diiwaan galisay seddex gool iyo seddex caawin 30 kulan oo Primeira Liga ah oo uu u ciyaaray kooxda Ruben Amorim, kaasoo ku dhamneysatay sideed dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda kaalinta labaad ee Porto.
Porro ayaa sidoo kale ku guuleystay daaficii ugu fiicnaa abaalmarinta bisha ee Portugal bilihii Nofeembar, Disembar iyo Janaayo, waxaana uu dhaliyay goolka guusha ee kooxda Sporting fiinaalkii koobka Allianz Cup ee ay ka qaadeen kooxda Braga.
RASMI: Tottenham Oo Erik Lamela + Lacag Kusoo Iibsatay Bryan Gil ( Waa Kuma Xiddigan?)